Date My Pet » 5 Nzira Chisingafaniri Tech Vanotambura
Pamberi mazuva vandine ID, mameseji uye munzanga vezvenhau chiri unogona norugare dhayira mukomana wacho (kana musikana wacho) nhamba kakawanda kusvikira wemimwe yenyu akava ndapera kubva kudzvanya mabhatani. With ano zvinoshamisa zvigadzirwa yokuzivisa zvose zvaunoita, vachiona zita renyu uye nhamba mifananidzo inokukurudzira pamusoro muchitokisi chake mana, shanu kana kakawanda zuva zvachose Dzima. Izvozvo zvinongofanana nokushandura mazuva magwaro, na uye nemagariro nevezvenhau mameseji. Hazvina kunge kuti @JohnDoe anoda kuverenga nokudanidzira rwako Tweets kwaari pamusoro awa awa ose kana kuwana rugwaro pashure rugwaro achishamisika uri kupi uye zvauri kuita. Ndiyo muzvigadzirwa nerokuti kumutevera kumativi, nguva dzose peaking pamusoro wake papfudzi.
Kana overdependence dzenyu mudiwa wako ari kuuya achibva ive overdependence pamusoro zvemichina, kucheka namatirai uye kune chiitwa kuti hakudi mameseji, tweeting, mameseji kana zvimwewo cyber kumutevera.
Yakarova yokurovedza muviri. Sezvo elliptical anorovera iwe uye pasi, mano ako dhayira kana chinyorwa achaenda achibva akatisiyira kune poromoka. Kutoti waronga pane mameseji chinhu chinobuda kufanana, "Hu T W? Wgats kumusoro "hamusi zvichida kuwana chikwekwe uye edza kuita kuonana panguva Workout yako. Somushandi akawedzera bhonasi anotenda kunogona kukubatsira kuzorora uye de-kunetseka, kuita kudiwa vanoshayiwa kuenda downhill. Kana usina yokurovedza muviri nhengo, usamhanya panze uye kuwana mumwe chete kuti kutiza kwenyu vanoshayiwa maitiro. Tora imbwa dzenyu famba, mumbofamba jog kumativi yaunogara kana yakarova bhasikoro trails yako mupaki. Chinokosha kuti vayeuke: Siya Sero rako pamusha kana yenyu yokurovedza muviri yokuchinjira mbatya kuchikoro. Kana usina, haugoni kuishandisa.
Call mumwewo. Doma mumwe nguvo dzako shamwari somunhu akasarudzwa vandine. Kana wava kuda kuita kudanwa wechipiri kana wechitatu chinyorwa, unogona achiri tora foni yako - sokuvapo munhu panorumwe kuguma Guy wako kana musikana. Rega shamwari yako kutaura iwe pasi, achiyeuchidza kuti une zvakawanda vanhu muupenyu hwenyu akuchengete kambani.
Ita gunde kwete cyber. Kana zvikaitika kuti browse Facebook peji ake mashoma vakawandisa nguva, mikana haachazombonzwi kuziva kutoti iwe kuti pachena. Kana ukavimba naye zvechokwadi, hapana chikonzero kuti aone pamusoro pake 20 kanomwe pazuva. Shure kwezvose, iye zvimwe akanyanya akangwara kuposita Pics of pachake uye mumwe musikana kana anoziva kuti unogona kuzviona. Kana asiri kuti akazochena, nei muri pamwe naye zvakadaro? Kana zvikaitika kuti abate mumwe zvishomanana zvichange zvakawanda munzanga nevezvenhau peji ake, regai kuramba kuposita mashoko. He, neshamwari dzake, havafaniri kuziva kuti uri papeji ake ose maminitsi mashanu.
Enda foni resabata. Kana uri kutanga regai namatirai ari zvinokambaira pamusoro pako, isa Sero wako zororo kuti zuva. Nepo izvi sokunge chisingabviri, vanhu vakaita pfuurirai refu asati dzeserura nokusingaperi akava. Dzokai foni yako kure, ndokuisa mudhirowa uye kuita zvirongwa neshamwari nemhuri rose zuva.
Rova guta. Rongai manheru neshamwari. Paunenge uri wakabatikana dzokudyira, kutamba kana ndichiona ichangoburwa blockbuster flick, iwe haungaiswi kuridza runhare kukwira rudo rwenyu kana mameseji iye reba. Kana ukaita ukaona peaking panguva foni yako, achida kupinda kukurumidza rugwaro apo shamwari dzako dziri kutarira vamwe nzira, zviwisire kunyika chipo.